चुनाब अघि नेता भेट्ने चुनाव पछि बिज्ञप्ति लेख्ने ! -आर के त्रिपाठी | Nepalese Diaspora
के नराम्रो गरेका छन र विदेशस्थित राजनैतिक दलका कार्यसमितीका साथीहरुले ? म त बिदेशस्थित राजनैतिक दल यसको कार्यसमितिका साथीहरुले NRNA र यसको आन्दोलन आहवानमा सहयोग गरेकै देख्छु। राजनैतिक दलका कार्यसमितीका साथीहरुले NRNA मा जिम्मेवारी लिन राजनैतिक दलको कार्यसमिती को पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने नभए NRNA को कार्यसमितीको सदस्यबाट निस्कासन गर्ने कुरा न्यायोचित हुन सक्दैन। यसो गरियो NRNA धुजाधुजा भई सकिन्छ। यो समयले देखाउने कुरा हो।
पद नलिएपनि मनभित्र भएको राजनैतिक सोच कहिले पनि हट्दैन है साथीहरु ! निर्णय लिनुभन्दा पहिले भविष्यमा पर्ने नकारात्मक परिणामले NRNA लाई नै खाला । समयमै हेक्का भया ! म आर के त्रिपाठी जहाँ गएपनि राजनैतिक दलको पदमा भए पनि नभए पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेता कार्यकर्ताको रूपमा मलाई चिन्ने सबैले ग्रहण गर्दछन । के के न क्रान्तिकारी काम गरें शुद्धपन ल्याएँ भन्दा यस निर्णयले आफैलाई खान्छ ।
अधिकार प्राप्तीको लागी नेपालका राजनैतिक पार्टी, नेता सांसदकहाँ दिनदिनै धाउने, चियर्स र बियर्स गर्ने अनि मिनेटमै त्यही नेतासंग खिचाएको फोटो पोष्ट गरि सेयर गरी आनन्द लिने, बिमानस्थल आउने बितिकै त्यहि नेताहरुको स्वागत गर्न राजनैतिक दलका कार्यकर्ताभन्दा हामी NRNA कार्यसमिती साथीहरुनै तछाड मछाड गरी एअरपोर्ट पुग्ने अनि हामी प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्ने ! यो भन्दा भद्दा मजाक के हुन्छ होला?
कुन एनआरएनए नेतृत्वसंग कुन नेताको फोटो चाहियो ? छिनभर मै उपलब्ध गराउन सकिन्छ । हाम्रा एनआरएनए नेतृत्वहरु मध्ये हिजोको ईतिहास र आजको संलग्नता कसको के हो ? सबैको सबैलाई थाहा छ । अनि बर्तमानमा कसको कुन पार्टीको कुन नेतासंग निकटता छ भन्ने पनि छर्लंगै छ । पानी माथिको ओभनो बन्ने दुस्प्रयास कसैले पनि नगर्दा हुन्छ ।
हामी आफै नै भनौ त राजनिती हामी एनआर एन चलाउनेले गरेका छौं की अरुले ? गहन प्रश्न यो हो ।
यो पनि पढ्नुहोस : समाजसेवी राजु पराजुलीद्वारा नेप्लिज डायस्पोरालाई शुभकामना
मेरो अनुभवले के देखाउँछ भने मेरो दुई कार्यकाल बेलायतमा महासचिब भई चलाउँदा यहाँस्थित राजनैतिक दलका अध्यक्ष पदाधिकारी कार्यसमितीका सदस्यहरु राजनैतिक दलका साथीहरुले सहयोग सहभागीताले NRNA को संगठन दरो र उर्जाशिल बनाएको थिएँ । यि राजनैतिक दलका साथीहरुको साथ सहयोगलाई म धन्यबाद पनि दिन चाहन्छु।
हालै महासचिब हेमराज शर्माको नामबाट प्रेशित बिज्ञप्ती पढ्दा यसले सकारालकभन्दा नकारात्मक असर पर्ने मेरो आत्मादेखीको ठहर गरेकोले उक्त निर्णय सच्चाउन आग्रह गरेछु ।दार्शनिक एरिष्टोटलले लेखेका छन्: “राजनैतिक विचार बिनाको मानब मृत प्राय: हुन्छ।
घुम्ने कुर्सीमा बसेर पदको उन्मादमा कुर्सी घुमाई घुमी बिज्ञप्ति लेख्ने निर्देशन दिने, बिज्ञप्ति लेख्ने र सहि धस्काउने सबैले आफ्नै बिगत हेरौं । बिगतका केहि प्रतिनिधि तस्बिर त संगै राखे कै छु ।आगत पनि हेरौं । डेढ बर्षमा चुनाब आउछ, निर्देशन दिने र सहि धस्काउनेहरु नै नेताका कोठाकोठामा पुगेर लम्पसार परेको तस्बिर देख्न नपरोस । चुनाब अघि नेता भेट्ने चुनाव पछि बिज्ञप्ति लेख्ने ! यो प्रबृत्ति तुरुन्त बन्द होस् ।सबैलाई हेक्का भया !
(आर के त्रिपाठी लण्डनमा सक्रिय एनआरएन अभियन्ता हुनुहुन्छ । )
एनआरएनको आउदो चुनाव र मनका कुरा -महेश भट्टराई
बाल्टिमोर “बाना” र चुनाब प्रसंग -महेश भट्टराई